IWCA ထူးချွန်စာအုပ်ဆု - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
အမည်စာရင်းများအတွက် ခေါ်ဆိုမှု- 2022 IWCA ထူးချွန်စာအုပ်ဆု
IWCA ထူးချွန်စာအုပ်ဆုကို နှစ်စဉ်ပေးအပ်သည်။ စာရေးစင်တာအသိုင်းအဝိုင်း၏အဖွဲ့ဝင်များအား IWCA ထူးချွန်စာအုပ်ဆုအတွက် အရေးအသားစင်တာသီအိုရီ၊ လက်တွေ့၊ သုတေသနနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်သည့် စာအုပ်များ သို့မဟုတ် အဓိကလက်ရာများကို အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော စာအုပ် သို့မဟုတ် အဓိကအလုပ်များကို ယခင်ပြက္ခဒိန်နှစ် (2021) အတွင်း ထုတ်ဝေရပါမည်။ တစ်ခုတည်းသော စာရေးဆရာနှင့် ပူးပေါင်းရေးသားထားသော လက်ရာများ နှစ်ခုစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို၊ ပုံနှိပ် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ပညာရှင်များက ဆုအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။ ကိုယ်တိုင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လက်မခံပါ၊ နှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူတိုင်းသည် တစ်ဦးတည်းသာ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်သည်။
အဆိုပြုလွှာများအားလုံးကို တစ်ဆင့်ခံ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂူဂဲလ်ပုံစံ. အမည်စာရင်းတင်သွင်းရာတွင် အောက်ပါဆုစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပုံတို့ကို ဖော်ပြထားသည့် စာလုံး 400 ထက်မပိုသော စာ သို့မဟုတ် ကြေငြာချက်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ (တင်ပြချက်အားလုံးကို တူညီသော စံနှုန်းများဖြင့် အကဲဖြတ်ပါမည်။)
စာအုပ် သို့မဟုတ် အဓိက အလုပ်ဖြစ်သင့်သည်။
စာရေးဌာနများ၏ ပညာသင်ဆု သို့မဟုတ် သုတေသနအတွက် သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
အနိုင်ရရှိသူအား ဗန်ကူးဗားရှိ 2022 IWCA ညီလာခံတွင် ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ် Google ဖောင်ကို ဝင်ခွင့်မရသူများ) မှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို IWCA ဆုပေးပွဲ ပူးတွဲဥက္ကဌများ၊ Leigh Elion (lelion@emory.edu) နှင့် Rachel Azima (razima2@unl.edu).
2021: Shannon Madden၊ Michele Eodice၊ Kirsten T. Edwardsနှင့် အလက်ဇန္ဒြီးယား Lockettအယ်ဒီတာများ။ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား စာရေးဆရာများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွေ့အကြုံများမှ သင်ယူခြင်း။။ Utah ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, 2020 ။
2020: လော်ရာ Greenfield, Radical Writing Centre Praxis - ိုံင်ငံရေးိံငြ့်ပတ်သက်မြိးံငြ့်ထိရောက်သည့်ဆက်သယ်ြရေးအစီအစဉ်မParား။ Utah ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, 2019 ။
2019: Jo Mackiewicz ပါ, Writing Center - အချိန်နှင့်အမျှပြောဆိုခြင်း - ရောထွေးသောနည်းလမ်းများလေ့လာခြင်း။ Routledge, 2018. ပုံနှိပ်ပါ။
Harry C. Denny၊ Robert Mundy၊ Liliana M. Naydan၊ Richard Sévère၊ နှင့် Anna Sicari (အယ်ဒီတာများ)၊ စင်တာထဲမှထွက်ပါ - အငြင်းပွားမှုများနှင့်ပုဂ္ဂလိကရုန်းကန်မှုများ။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2018. ပုံနှိပ်ပါ။
2018: R. Mark Hall၊ စာအရေးအသားစင်တာအလုပ်၏စာသားပတ်ပတ်လည် Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2017 ပုံနှိပ်ပါ။
2017: Nikki Caswell, ရေဗက္ကာဂျက်ဆင်နှင့် ဂျက်ကီ Grutsch McKinney. စာအရေးအသားစင်တာဒါရိုက်တာများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2016. ပုံနှိပ်ပါ။
ဂျက်ကီ Grutsch McKinney. ရေးသားစင်တာသုတေသနအတွက်မဟာဗျူဟာ. နန်းတော်စာနယ်ဇင်း, 2016 ။
2016: Tiffany Rousculp. လေးစားမှု၏အပြောအဆို။ NCTE စာနယ်ဇင်း, SWR စီးရီး။ ၂၀၁၅ ။
2014: ဂျက်ကီ Grutsch McKinney. အရေးအသားစင်တာများအတွက်အရံအမြင်များ. Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2013 ပုံနှိပ်ပါ။
2012: လော်ရာ Greenfield နှင့် ကရင် Rowan (အယ်ဒီတာများ) ။ အရေးအသားစင်တာများနှင့်လူမျိုးသစ်ခွဲခြားမှု - ရေရှည်တည်တံ့သောဆွေးနွေးမှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုမှု။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2011. ပုံနှိပ်ပါ။
2010: Neal Lerner. အရေးအသားဓာတ်ခွဲခန်း၏အတွေးအခေါ်။ Carbondale: တောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ် UP, 2009 ပုံနှိပ်ပါ။
2009: ကီဗင် Dvorak နှင့် Shanti ဘရုစ် (အယ်ဒီတာများ) ။ အရေးအသားစင်တာအလုပ်အတွက် Creative ချဉ်းကပ်မှု။ Cresskill: Hampton, 2008 ပုံနှိပ်ပါ။
2008: ဝီလျံဂျေ Macauley, Jr.နှင့် က Nicholas Mauriello (အယ်ဒီတာများ) ။ Marginal Words၊ Marginal Work ?: စာရေးခြင်းစင်တာများတွင်အကယ်ဒမီကိုသင်ကြားပေးခြင်း. Cresskill: Hampton, 2007 ပုံနှိပ်ပါ။
2007: ရစ်ချတ်ကံt. ကျောင်းသား - ၀ န်ထမ်းများရေးသားသည့်စင်တာကိုဖန်တီးရန်လမ်းညွှန် - ၆-၁၂ တန်း။ နယူးယောက်: ပေတရု Lang, 2006 ပုံနှိပ်ပါ။
2006: Candace Spigelman နှင့် လော်ရီ Grobman (အယ်ဒီတာများ) ။ တည်နေရာ - စာသင်ခန်းအခြေပြုအရေးအသားနည်းပြခြင်း၌သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2005. ပုံနှိပ်ပါ။
2005: Shanti ဘရုစ် နှင့် ဘင်ရာဖုတ် (အယ်ဒီတာများ) ။ ESL စာရေးသူများ - စာရေးခြင်းဆိုင်ရာစင်တာနည်းပြများအတွက်လမ်းညွှန်။ ပို့စ်မောက်, NH: Heineman / Boynton-Cook, 2004 ပုံနှိပ်ပါ။
2004: မိုက်ကယ်အေ Pemberton နှင့် Joyce Kinkead (အယ်ဒီတာများ) ။ စင်တာတွင်ကိုင်ဆောင်ထားလိမ့်မည် - Writing Center Scholarship အပေါ်အရေးပါသောအမြင်များ။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2003 ပုံနှိပ်ပါ။
2003: Paula Gillespie၊ Alice Gillam၊ Lady Falls Brown၊ နှင့် Byron နေပါ (အယ်ဒီတာများ) ။ စာရေးခြင်းစင်တာသုတေသန။ ။ Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002. Print ။
2002: ဂျိန်းနယ်လ်ဆင် နှင့် ကေသီ Evertz (အယ်ဒီတာများ) ။ စာရေးခြင်းစင်တာများ၏နိုင်ငံရေး။ ပို့စ်မောက်, NH: Heineman / BoyntonCook, 2001 ပုံနှိပ်ပါ။
2001: စင်ဒီ Johanek. သုတေသန Composing: အပြောအဆိုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွက် Contextualist Paradigm ။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 2000 ပုံနှိပ်ပါ။
2000: နန်စီ Maloney Grimm. ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များ - Postmodern Times အတွက်စာအရေးအသားစင်တာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ပို့စ်မောက်, NH: Heineman / Boynton-Cook, 1999 ပုံနှိပ်ပါ။
1999: အဲရစ် Hobson (အယ်ဒီတာ) ။ Wing the Writing Center ။ Logan: Utah ပြည်နယ် UP, 1998 ပုံနှိပ်ပါ။
1997: Christina Murphy, ဂျိုးဥပဒေနှင့် Steve Sherwood ပါ (အယ်ဒီတာများ) ။ အရေးအသားစင်တာများ။ Westport, မှန် CT: Greenwood, 1996 ပုံနှိပ်ပါ။
1996ဂျိုးလော & ခရစ္စတင်းမာဖီ၊ အရေးအသားစင်တာများအတွက်မှတ်တိုင်အက်ဆေး။ Davis က, CA: Hermagoras, 1995 ပုံနှိပ်ပါ။
1995: ဂျုံးအေ Mullin နှင့် ray Wallace (အယ်ဒီတာများ) ။ လမ်းဆုံများ: စာပေစင်တာ၌သီအိုရီအလေ့အကျင့်။ Urbana, IL: NCTE, 1994. ပုံနှိပ်ပါ။
1991: Jeanne Simpson နှင့် ray Wallace (အယ်ဒီတာများ) ။ စာအရေးအသားစင်တာ - လမ်းညွှန်အသစ်များ။ နယူးယောက်: ပန်းကုံး, 1991 ပုံနှိပ်ပါ။
1990: Pamela ခ Farrell. အထက်တန်းကျောင်းအရေးအသားစင်တာ - တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ Urbana, IL: NCTE, 1989. ပုံနှိပ်ပါ။
1989: Jeanette Harris က နှင့် Joyce Kinkead (အယ်ဒီတာများ) ။ ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ, ကွန်ပျူတာ။ အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် 10.1 (1987) ၏အထူးထုတ်ဝေ။ ပုံနှိပ်ပါ။
1988: Muriel Harris က. တစ် ဦး -to- One သင်ပေး: အဆိုပါအရေးအသားညီလာခံ။ Urbana, IL: NCTE, 1986. ပုံနှိပ်ပါ။
1987: အိုင်ရင်း Lurkis Clark က. စင်တာတွင်ရေးသားခြင်း - အရေးအသားစင်တာတွင်သင်ကြားခြင်း။ Dubuque, IA: Kendall / Hunt က, 1985 ပုံနှိပ်။
1985: Donald အေ McAndrew နှင့် သောမတ်စ်ဂျေ Reigstad. အရေးအသားကွန်ဖရများအတွက်သင်တန်းပို့ချသင်တန်း။ Urbana, IL: NCTE, 1984. ပုံနှိပ်ပါ။